Ndege dzeEuropean dziri kutsvaga nguva yakaoma yechando
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Ndege dzeEuropean dziri kutsvaga nguva yakaoma yechando
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Munguva yezvinowanzoitika mwaka wekuEurope, denda iri rinogona kuita kuti mamiriro ekushanda ave akaoma.
Nemari ichiri kudzvanyirirwa, ndege dzendege dzine yakaoma nguva yechando pamberi pavo.
Mitsva COVID-19 dzakasiyana dzinogona kudzikisira vafambi 'kuda kubhururuka.
Mari dzevashandi dzichakwira uye sarudzo dzakaomarara dzemari dzinofanirwa kuitwa.
Ndege dzekuEurope dzakagadzirirwa kusangana nenguva yakaoma yechando nekuda kwedenda riri kuenderera uye kuvimba kwekufamba kungangodaro kwakadzvinyirirwa. Mitengo yakaderera ichave yakakosha mukusimudzira kudiwa sezvo zvirambidzo zvekufamba zvingangoenderera.
Nemari ichiri kudzvanyirirwa, ndege dzendege dzichava nenguva yakaoma yechando kumberi. Munguva yezvazviri tsika yekukanganisa mu Europe, denda iri rinogona kuita kuti mamiriro ekushanda ave akaoma.
Kunyangwe hazvo kuda kwaive kutanga kudzoka ino zhizha, nguva yechando inogona kunge iri imwe nyaya. COVID-19 kesi dzinogona kusimuka, uye zvimwe zvimwe zvingamuka, zvichideredza vafambi 'kuda kubhururuka. Iine hurumende dzakawanda dzinopedza kutsigira furlough, kusanganisira iyo UK, mari yevashandi inokwira, uye sarudzo dzakaomarara dzemari dzinofanirwa kuitwa. Chiyero chisina kusimba chinofanirwa kurohwa pakati pekushandira nzvimbo dzakawanda uye nekuchengetedza mashandiro emari ari pasi pekutonga. Ndege dzinofanirwa kunge dziine nimble yekuona kupona.
Vapfuuri vanogona kuramba vachinonoka zvirongwa zvekufamba munguva ino yechando nekuda kwekusaziva kukuru. Kunyangwe kuburitsa kwekudzivirira kwekuEurope kuri kufambira mberi mushe, musiyano weDelta unonetsa. Iine dzimwe nyika dzichinetseka kuve nehutachiona, zvinorambidzwa kufamba zvinoratidzika kunge zvicharamba zviripo. Kuronga nzendo kunoenderera kuchinetsa kuwedzera nekuramba uchichinja-ganhurira senge chinodikanwa cheasina kunaka COVID-19 bvunzo dzekupinda mumatunhu mazhinji. Uyezve, zvinorambidzwa kufamba ndiyo yechipiri inodzivirira pakufamba, iine 55% yevakabvunzwa mune yekupedzisira indasitiri yekuvhota vachitaura chikonzero ichi chekudzivisa kufamba. Nzira nzira dzinofanirwa kutarisa kunzvimbo dzinoenda dzine mashoma zvipingamupinyi uye nzira yekukurumidza / yekupindura inofanirwa kutorwa.
Kukwikwidzana pakati pendege muEurope kwaityisa pre-COVID uye kazhinji mutengo ndiwo waisarudzira vafambi pakusarudza ndege. Nekuda kwekusava nechokwadi chokwadi munguva ino yechando, kukurudzira kubhuka chichava chinangwa chakakosha.
Kuderedza fares yekusimudzira kudiwa ichave iri zano yakatumirwa mwaka uno wechando kuzadza zvigaro. Izvi zvinogona kukwezva 57% yevakabvunzwa vekuEurope vakatara mutengo sechinhu chakakosha kwazvo pakusarudza zita renhandare yendege, maererano nesarudzo ichangobva kuitwa. Mutengo uchave wakakosha kukurudzira kufamba mune dzenguva uye dzakachipa ndege dzendege dzinogona kunge dziri ndege dzinotyisa munguva ino yechando. Nevafambi vari kuramba vachifamba padhuze nepamba, yakakura nzvimbo yeEuropean yevatakuri iyi inofanirwa kushandira mukana wavo.
Gunyana 21, 2021 pa 01: 31